မြောက်ကိုးရီးယားမှ ရေအောက်ကနေ တိုက်ချင်းပစ်ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်နိုင်တော့မှာလား ????? – Sunthit Myanmar
မြောက်ကိုးရီးယားအကြောင်းကို အသေးစိတ်လေ့လာနေတဲ့ 38 North ဝက်ဘ်ဆိုက် စာမျက်နှာမှ ဖမ်းယူရရှိထားသော ဂြိုလ်တုပုံများအရ မြောက်ကိုးရီးယားဟာ တာဝေးပစ် ထိပ်ဖူးတပ်ဒုံးကျည်တွေကို သယ်ဆောင်ပစ်ခတ်နိုင်မည့် ရေငုပ်သင်္ဘောကို ပထမဦးစွာ တည်ဆောက်မည့် စီမံကိန်းအပေါ် အတော်လေးကို အလေးနက်ထားပြီး အားသွန်ခွန်စိုက်ပြုလုပ်နေ ကြောင်း 38 North မှသုံးသပ်ထားပါတယ်။
ရေငုပ်သင်္ဘောပေါ်မှ တာဝေးပစ်ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်ဖို့ဆိုတာက လုံးဝစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဒါဟာပြုံယမ်းရဲ့ မဟာဗျူဟာ ရည်ရွယ်ချက်များထဲမှ တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုရေငုပ်သင်္ဘောမျိုး တည်ဆောင်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းနေတာ နှစ်နဲ့ချီကြာနေရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ စီမံကိန်းထားရှိရာ မြောက်ကိုးရီးယား အရှေ့ဘက်ကန်းရိုးတန်းရှိ ရှင်ပိုသင်္ဘောကျင်းကို ယခု၂၀၁၇ တစ်လျှောက်လုံး ဂြိုလ်တုမှ ဖမ်းယူရရှိထားသောပုံများအရ အပြင်းအထန် အဆက်မပြတ်ပြုလုပ်နေကြောင်းသိရပါတယ်။
အဆိုပါ စီမံကိန်းဟာ မည်မျှအတိုင်းအတာအထိ တိုးတက်နေပြီးလဲဆိုတာကို ဂြိုလ်တုဓာတ်ပုံတစ်ခုတည်းကြည့်ပြီး ခန့်မှန်းဖို့ခက်ခဲနေပေမဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာ လေ့လာရေး အင်စတီကျုမှ လက်နက်ထိန်းချုပ်ရေး ကျွမ်းကျင်သူမာ့က်ဖစ်ဇ်ပက်ထရစ် က တကယ်လို့ မြောက်ကိုးရီးယားဟာ သူရဲ့ နျူကလီးယားအင်အားကို ဖယ်ရှားတိုက်ထုတ်ခံရရင် ရေငုပ်သင်္ဘောကနေ ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်တာက မြောက်ကိုးရီးယားရဲ့ ဒုတိယရွေးချယ်စရာ လုပ်နိုင်ခြေဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“အခုအချိန်ထိ မြောက်ကိုးရီးယားဟာ သူ့ရဲ့ ဒုံးကျည်တိုးတက်မှုခြေလှမ်းတွေကနေ ဆန်းစစ်သူတွေကို မျှော်လင့်ထားတာထပ် ပိုပြီးလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြပြီး အံ့အားသင့်စေတယ်” လို့ မာ့က်မှပြောပါတယ်။
Categorized as News Tagged ေျမာက္ကိုးရီးယားမွ ေရေအာက္ကေန တိုက္ခ်င္းပစ္ဒံုးက်ည္ျပစ္လႊတ္ႏိုင္ေတာ့မွာလား ?????